Qaramada Midoobay oo Sheegay in ay dib u dhisayaan nolosha Gaza | Radio Balcad
Home WARARKA MAANTA Qaramada Midoobay oo Sheegay in ay dib u dhisayaan nolosha Gaza
Qaramada Midoobay oo Sheegay in ay dib u dhisayaan nolosha Gaza
Hay’adda Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga Falastiiniyiinta – oo loo yaqaan UNRWA – ayaa ku dhawaaqday liis ay ka mid yihiin waxyaabaha mudnaanta la siinayo maaddaama ay ka wareegeyso jawaab-celinta degdegga ah ee ka soo kabashada Gaza.
Sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee AFP, madaxa UNRWA ee Gaza, Matthias Schmale, ayaa u sheegay wariyeyaasha in saddex arrimood ay muhiimad u leeyihiin dagaalada ka dib: raadinta iyo taageerida kuwa hoy la’aanta ah; qiimaynta khasaaraha; iyo gacan ka geysashada dib-u-dhiska nolosha “dad argagaxsan, oo argagaxsan”.
Mr Schmale ayaa sidoo kale walaac ka muujiyay aafada Covid ee ka jirta Gaza. Mawjaddii labaad ee halkaas ka jirtay waxay bilaabeen inay xasilloonaadaan ka hor intaan dagaalku qarxin.
“Qaar badan oo naga mid ah aad ayaan uga walwalsanahay in … runtii waxaan aragnay bilowgii mowjadii saddexaad sababtoo ah dabcan taxaddar taxaddar ah iyo wixii la mid ah oo aan loo hogaansamin,” ayuu yidhi.
Laakiin inta uu sheegay inuu dareemay “dareen aad u weyn oo xasilooni ah” xabbad joojinta, wuxuu intaas ku daray in xabbad joojinta la dareemay “jajab”.
“Waxaan ku qanacsanahay ka dib markii aan halkaan joogay seddex sano iyo badh in aan ku laaban doono dagaal haddii aan wax laga qaban sababaha keena,” ayuu yiri.
Previous articleIsraeli defence minister – all objectives achieved
Next articleWe need to rebuild lives in Gaza, says UN
Dowladda Norway oo Warqad Dhaqtar Cadaynn ah Uga baahan Waalidka doonaya...
Madaxweynaha Mareykanka” Waxaan joojinay taageerada dagaalka Yemen”